In ka badan 13years alaabooyin cusub oo soo koraya iyo moodello casriyeyn ah oo casriyeyn ah, waxaa jira in ka badan 20 nooc oo moodooyin ah oo loogu talagalay dalab kala duwan. Waxyaabaha muhiimka ah ee XIKOO waxaa ka mid ah qaboojiyaha hawada ee la qaadan karo, qaboojiyaha hawada ee warshadaha, qaboojiyaha hawada ee daaqada, qaboojiyaha hawada bartamaha, qalabka tamarta qoraxda ee DC iyo qaybaha qaboojiyaha hawada. si ballaaran loogu isticmaalo guriga, xafiiska, dukaamada, isbitaalka, saldhigyada, teendhada, aqalka dhirta lagu koriyo, makhaayadaha, aqoon isweydaarsiga, bakhaarka iyo meelaha kale.
XIKOO waxay leeyihiin xakamaynta tayada badeecada oo adag iyo kormeer kasta oo habka wax soo saarka ah. Laga soo bilaabo xulashada maaddada, farsamada soo saarista, soosaarka, xirmada iyo tijaabada. Qaboojiyaha hawada ayaa la ansixiyay by CE, SASO, ROHS, IEC iwm Oo wax soo saarka our sidoo kale la aqoonsan yahay by macaamiisheena, macaamiisheena caadiga ah sii sannado dheer iskaashi nala.
Shabakada iibka gudaha ee XIKOO waxay kahadashaa 21 gobol iyo 86 gobal oo horumaray, in kabadan 112 kuwa wax iibiya oo wadanka oo dhan ah. Wax soo saarkana waxaa loo iibgeeyaa 35 dal iyo gobollo dibedda ah. Gaar ahaan horumariyo macaamiisha iskaashiga muddada-dheer ee Saudi Arabia, Kuwait, Mali, Morocco, Sudan, Vietnam, Malaysia, Thailand, USA, Brazil, Germany, Australia iyo dalal kale.
XIKOO Sii wad cilmi-baarista iyo hal-abuurnimada, wuxuu ku guuleystay shirkad farsamo sare leh, wax soo saarka farsamada sare iyo sharaf kale. Kasbaday patent naqshad badan, patent hal abuur leh iyo shati wax ku ool ah. Taageere-qaboojiye hawadu waa adeegsi hooseeya iyo alaab saaxiibtinimo u leh deegaanka, XIKOO wuxuu kaloo soo saaray ilaha cusub ee tamarta qorraxda ee qaboojiyaha hawada uumi baxa. Waxaan rajeyneynaa inaan gacan ka geysano keydkeena tamarta adduunka iyo dhismaha deegaanka ee saaxiibtinimada leh iyada oo loo marayo dhiirrigelinta iyo soosaarida qaboojiyaha hawada ee XIKOO.
XKIOO wuxuu maal galiyay sanduuq fara badan wuxuuna ka shaqeeyay horumarinta alaabooyinka cusub sanadihii la soo dhaafay. Mustaqbalka, waxaan u keeni doonnaa alaabooyin cusub oo dheeraad ah macaamiisheena, Ku soo dhawow inaad iskaashi la yeelato XIKOO, Ku soo dhawow fikraddaada wanaagsan iyo inaad ku horumariso alaab cusub XIKOO.